संविधान र कानुनभन्दामाथि राजतन्त्रमा राजा विष्णुका अबतार भएजस्तै के न्याधिशहरु भगवान हुन् ? - Arthasansar
संविधान र कानुनभन्दामाथि राजतन्त्रमा राजा विष्णुका अबतार भएजस्तै के न्याधिशहरु भगवान हुन् ?
आइतबार, २८ कार्तिक २०७८, २० : १७ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय राजनीतिको सरगर्मी बढेका बेला देश चिसोले कठ्यांग्रिएको छ । जनता चिसोले कठ्यांगि्रएका बेला नेताहरू वातानुकूलित बंगलामा बसेर सत्ताको अंकगणित मिलाउन कोशिस गरिरहेका छन् । राज्यविनाको नागरिक हुदैन र नागरिक विनाको राज्य हुँदैन । राज्य सबैको संरक्षक हो । सरकार अभिभावक हो । तर के देश र जनताप्रति उत्तरदायी नेता र पार्टीहरू छन् ? यदि छन् भने हामी नागरिकलाई जवाफ चाहियो ।